Winpal: Label Jumlada Ah Iyo Daabacaha Daabacaha, Daabacaha Oem Wifi
Soo-saare Sare ee Daabacaha Mini-ga Tan iyo 2010
2 Inch / 58mm Taxanaha
3 inji / 80 mm Taxanaha
4 inch Taxanaha
Taxanaha Kala-wareejinta kuleylka
4 INCH LABEL Faafinta
2 & 3 INCH LABEL Faafinta
3 INIT RABITAANKA RECEIPT
2 INIT RABITAANKA RECEIPT
WPB200 4 Prin Daabacaha Label
WP-T3A 4 ter Daabacaha Label
WP300A 4 Prin Daabacaha kuleylka
WPLB80 80mm Daabacaha Label Dareeraha
WP80B 80mm Daabacaha Wareegtada kulul
WP80L 3 Prin Daabacaha Label Dareemka
WPLB58 58mm Daabacaha Label Dareeraha
WP300W 3 Prin Daabacaha Heerkulka Daabacaha
WP260 80MM Daabacaha Heerkulka
WP230C 80mm Daabacaha Heerkulka Kulayliyaha
WP260K 80mm Daabacaha Heerkulka Kulayliyaha
WP230F 80mm Daabacaha Heerkulka Kuleylka
WPCB58 58mm Daabacaha Heerkulka Kuleylka
WP-T2A 58mm Daabacaha Heerkulka Kuleylka
WP-T3K 58mm Daabacaha Heerkulka Kuleylka
WPB58 58mm Daabacaha Heerkulka Kuleylka
WP-T2C 58mm Daabacaha Kuleylka Kuleylka
WP-T2B 58mm Daabacaha Wareegtada kulul
WP-Q3B 80mm Daabacaha Moobilka
WP-Q3A 80mm Daabacaha Moobilka
WP-Q2B 58mm Daabacaha Moobilka
WP-Q2A 2inch Daabacaha Wareegtada kulul
WP-Q3C 58mm Daabacaha Moobilka
La xiriir macaamiisha si ay u ururiyaan shuruudaha macaamilka.
Injineer ayaa naqshadeeyay naqshadeynta oo wuxuu ku xaqiijiyay macaamiisha. Haddii hagaajin loo baahdo, injineerkeena ayaa beddeli doona oo dib u xaqiijin doona.
Naqshadeynta Motherboard-ka iyo soo saarkeeda
Muunadda waxaa la sameyn doonaa ka dib markii aan helnay oggolaansho oo naqshadeynta la xaqiijiyay.
Guangzhou Winprt Technology Co., Ltd. oo ku takhasustay cilmi baarista, horumarinta iyo soo saarida daabacayaasha pos: daabacaha kuleylka ee kuleylka, daabacaha daabacada iyo daabacadaha la qaadan karo in ka badan 10 sano. Waxaan hada ku suganahay Nansha Pilot Trade Trade Zone ee Magaalada Guangzhou City oo leh a marin u helida gaadiidka dhoofinta iyo dhoofinta gaarka ah.
Dhammaan alaabooyinkeennu waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah waxayna heleen CCC, CE, FCC, Rohs, shahaadada BIS ee amniga. Warshaddeena waxay leedahay in ka badan 700 oo shaqaale ah iyo 30 farsamo yaqaanno R&D. heerka cilladaysan ee daabacadu ka yar tahay 0.3% .Siyaasada wax soo saarka iyo wax soo saarka lagu kalsoonaan karo oo sareeya, waxaan ku siin karnaa adeegga OEM iyo ODM dalabaadka macaamiisha kala duwan lana kulmi macaamiisha qanacsanaanta.
Soo Saarkii Sanadlaha
Talooyin ku saabsan sida loo doorto Daabacaha saxda ah ee ku habboon ganacsigaaga
Maalmahan, daabacayaasha kuleylka waxaa loo isticmaalaa si aad iyo aad u ballaaran, sidoo kale waxay leeyihiin shaqeyn aad iyo aad u badan. Markaa keebaa kuleyliyaha kugu habboon? Waxaa jira noocyo iyo shaqooyin badan oo kala duwan oo daabacayaal ah oo aad suuqa ka xulato, qaar daabacadaha rasiidhada, qaar daabacaadda daabacaadda, iyo qaar ...
Maxaan Sameyn Karnaa Marka Daabacaha Barcode Ku Hayo Daabacaadda Xaashida Meeriska Ee Madhan
Markaad isticmaaleyso daabacaadda barcode daabacaadda, daabac warqadda calaamadda maran ee xaaladdan oo kale waa dhibaato caadi ah. Gaar ahaan daabacaadda barcode wax yar uun kadib markii la beddelo warqadda sumadda ama suunka kaarboonka, daabacaadda barcode waa mid aad u fudud in lagu boodo ifafaale ama dhibaato waraaqo badan oo maran, iyo ...
Nooca Daabacaha Barcode Iyo Sida Loogu Xulto Daabacaha Barcode Habboon
1. Mabda'a shaqada ee daabacaadda lambarka daabacaadda Barcode waxaa loo qaybin karaa laba habab daabacaad: daabacaadda kuleylka tooska ah iyo daabacaadda wareejinta kuleylka. (1) Daabacaadda kuleylka tooska ah Waxay loola jeedaa kuleylka soo baxa marka madaxa daabacan la kululeeyo, kaas oo loo wareejiyo warqadda kuleylka t ...
Taariikhda Horumarineed ee Madbacadda iyo Teknolojiyada Daabacadda ee Hadda
Taariikhda daabacadu sidoo kale waa taariikhda tikniyoolajiyadda sare iyo warshadaha. Tan iyo 1970-yadii, laser, inkjet, daabacaadda kuleylka iyo teknoolojiyadaha daabacaadda ee aan saamaynta lahayn ayaa soo ifbaxay oo si tartiib tartiib ah u bislaaday. Habka duubista kuleylka ee madaxa daabacaadda ayaa markii ugu horreysay loo adeegsaday fakiska mach ...
NO.80 JinGang Road, Degmada Nansha, Guangzhou, Guangdong, Shiinaha.
Rasiidka Daabacaha, Daabacaha Lacagta Mobilka, 80mm Daabacaha Heerkulka, Daabacaha Daabacaha Kululaynta, Daabacaha Daabacaha Heerkulka 80mm, Daabacaha Wifi Raadiyaha,
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010 - 2021: GuangZhou Winprt Technology Co., Ltd. Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay.